Sida loo doorto loona dayactiro fadhiga haddii aad bisad leedahay | Bisadaha Noti
Sida loo doorto loona ilaaliyo fadhiga haddii aad leedahay bisad
Maria Jose Roldan | | Riyooyin
Dhammaanteen ku nool hal bisad (ama ka badan) waa inaan la macaamilnaa laba, aan u yeerno, dhibaatooyinka yaryar: timaha iyo xagashada. Dhinaca kale, haddii xayawaanku leeyahay timo gaaban, dhogortiisa waxay ku dhegan tahay dharka fadhiga oo waxay umuuqataa inaysan jirin dariiq bini aadam oo looga saaro, haddii ay dheer tahayna waxay ka tagi kartaa tiro dhogor ah bilaha kuleylka badan.
Dhinaca kale, ciddiyaha ay haystaan ​​ayaa burburin kara qalabka guryaha. Nasiib wanaagse, waxay kuxirantahay sida aan u daryeelno fadhiga salootada, dhibaatadaas yar mar dambe sii adkaan mayso sidii loo cirib tiri lahaa. Sidaa darteed, waan kuu sharraxeynaa sida loo doorto fadhiga ugufiican hadaad bisad leedahay, iyo sida loo ilaaliyo sida maalinta koowaad.
1 Sidee loo doortaa fadhiga ugufiican?
2 Talooyin si bisaddaadu uga tegin "summad"
2.1 Xanaanee timaheeda
2.2 Sii masax
3 Sidee loo ilaaliyaa fadhiga fadhiga xaalad wanaagsan?
4 Fureyaasha si aad fadhiga uga dhigto mid hagaagsan
4.1 Dhar Bisad
4.2 Midab habboon
4.3 Ma laha geeso fiiqan
4.4 Waxba lugaha alwaax ma leh
4.5 Xoog leh oo la awoodi karo
Sidee loo doortaa fadhiga ugufiican?
Markaad la nooshahay ugu yaraan hal bisad oo aad baahi u qabto inaad iibsato fadhiga gogosha leh, waa inaad doorataa midka leh daaqad wanaagsan laakiin sidoo kale u adkeysanaya sida ugu macquulsan. Aynu aragno faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka nooc kasta:
Cuero: waxay leedahay qiimo ka sareeya, laakiin aad ayey u fududahay in si fudud loo nadiifiyo iyadoo la tirtirayo iyada oo qalalan.
Screen: way ka jaban tahay oo midabbo badan oo kala duwan ayaa jira, laakiin timaha ayaa si sahal ah loogu dhejiyay.
Iyadoo aan loo eegin nooca dharka la doorto, waxaan ficil ahaan u ilaalin karnaa fadhiga saafiga ah oo leh dhar ku habboon bisadaha. Waxaa jira laba nooc oo kala duwan:
Fouscurit: waa dhar dahaadhay oo loo isticmaali karo in lagu daboolo dhammaan noocyada alaabta guriga. Waxay celisaa nabarrada waxaana lagu nadiifin karaa maro, sidaas awgeedna timaha ayey ka saareysaa. Tan kaliya ee taban waa inaysan ka difaacin caarooyinka.
Courtisane: way ka yara adkaysi yartahay tan hore, laakiin waxay celisaa nabarrada. Waxaa jira qaar qaba Teflon. Aad ayey uga raaxo badan tahay Fouscurit.
Labada midkood haddii ay dhacdo in bisadu go'aansatay in ay xoqdo, wax badan lama arki doono. Dabcan, waa muhiim inuusan xoqin, marka aan aragno waxa aan sameyn karno si aysan uqabin.
Daawooyinka guriga ee xoqista bisadaha
Talooyin si bisaddaadu uga tegin "summad"
Bisadu ... waa maxay waxay tahay. Waxay leedahay timo iyo ciddiyo, waana inaan u jeclaano sida ay tahay. Laakiin waxaan sameyn karnaa waxyaabo badan si aan uga fogaanno in alaabta gurigeennu ay ku dhammaato burburin ka hor waqtigeeda, mana aha wax ka badan bixinta xayawaanka waxa uu u baahan yahay, taasi waa:
Ha yaraato ama ha dheeraato, maalin kasta waa inaad cadayato ugu yaraan hal mar. Inta lagu jiro xilliga daadinta, waa in la sameeyaa 2-3 jeer si loo yareeyo halista kubbadaha timaha ee sameysma sida ugu macquulsan. Intaas waxaa sii dheer, waa muhiim in la siiyo cunto tayo leh, oo aan lahayn dalagyo ama wax soo saar, maxaa yeelay taasi waxay hubin doontaa inay haysato jaakad caafimaad qabta, xoog leh oo dhalaalaysa.
Maalin kasta waxa ay finiinku wax badan qabato waa in ay ciddiyo ciddiyaha. Tanina waxay ku samayn doontaa fadhiga, lugaha kuraasta, ama meel kale oo aan loo baahnayn inaynaan iibsan hal (ama in ka badan) xoqan. Kuwaas Waa in lagu meeleeyaa qolalka qoysku nolosha ka sii sameeyo, maadaama ay noqon doonaan aagagga ay doofaarradu waqti badan ku qaadato.
Sidee loo ilaaliyaa fadhiga fadhiga xaalad wanaagsan?
Marka laga soo tago wax kasta oo aan ka wada hadalnay illaa iyo hadda, sidoo kale waxaa aad muhiim u ah in la daryeelo qalabka guryaha ee aan hadda soo iibsannay sida ugu wanaagsan ee suurtagal ah si ay u sii socdaan sannado badan. Sidaas darteed, waqti ka waqti, doorbidayaa hal mar maalintii ama maalin kasta, wasakhda ayaa loo baahan yahay in laga soo saaro inaan ka tagno. Tan awgeed waxaan u adeegsan karnaa boor ama, xitaa ka sii fiican, nadiifinta faakiyuumka
Bil kasta Waan ka saareynaa -hadday suurta gal tahay- dharka fadhiga oo waan dhaqi doonaa. Tani waxay si gaar ah lagama maarmaan u tahay haddii uu jiro qof xasaasiyad ku qaba timo jilicsan ama dander maadaama hadhaaga timaha bisadu sii xumayn karaan astaamahooda; iyo waliba waqtiga isbedelka.
Sida loo baro bisad inaysan sariirta fuulin
Fureyaasha si aad fadhiga uga dhigto mid hagaagsan
Hoos waxaan ku xisaabtameynaa dhammaan faallooyinka kor ku xusan, waxaan dooneynaa inaan ku siino talooyin dheeraad ah si sariirtaadu ugu fiicnaato qoyskaaga, sidoo kale iyadoo la tixgelinayo xubnaha caafimaadka ee gurigaaga. In kastoo bisaduhu madax banaanaan karaan, macnaheedu maahan inay xumaan yihiin ama inay jecel yihiin inay sameeyaan wax xun, waxay si fudud u qaadaan caqligooda, sida xoqida ciddiyahaaga fadhiga aad jeceshahay ama kursiga kuraasta.
Bisadaha yaryari waxay jecel yihiin inay xoqaan oo ay ciyaaraan, had iyo jeerna kama soo baxaan qashinka kitty… mararka qaarkood waxay u arkaan inay ku raaxeysanayaan inay naftooda ka nastaan ​​barkinta fadhiga sariirta. Natiijo ahaan, qalabka guryaha ayaa badanaa la waxyeeleeyaa. Waxaas oo dhan, waxaan ku siineynaa furayaasha si marka aad iibsato fadhiga fadhiga ama kursi gacmeed, waxaad iibsaneysaa midka run ahaantii ku habboon qof walba oo gurigaaga jooga.
Waxaa jira maryo alaab guriga ka samaysan oo aad ugu habboon qoysaska bisadaha leh. Ciyaarta, xoqida, daadinta iyo shilalka yar-yar ayaa dhib weyn u geysan kara kuraasta iyo kuraasta fadhiga, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan in la doorto walxaha leh dhar adag oo dhar ah.
Alaabta lagu daboolay dharka microfiber-ka ayaa u muuqda kuwo waara oo si fudud loo nadiifin karo. Xullo walxaha u adkeeya wasakhda markasta oo ay suurta gal tahay. Maqaarka iyo noocyada kaladuwan ee loo yaqaan 'synthetic alternatives' way fududahay in la nadiifiyo shilalka ka dib, laakiin uma istaagaan xoqida iyo xoqida cagahaaga yar oo ciddiyo fiiqan leh.
Ujeedadu waa in lagu ilaaliyo marada fadhiga fadhiga iyo kuraasta kuraasta oo ka ilaalinaysa dharka wax wasakhda leh waana adag tahay in bakteeriyadu soo dhex marto ... tani waa mid fiican maxaa yeelay markay waxyeello badani gaadho, badanaa waxay leedahay kharash la aqbali karo iibsan kara mid kale si aad u beddesho midka aad bisadu hore u xumaatay. Ma aha wax la mid ah in la iibsado dhar ilaalin ka badan fadhiga oo dhan!
In kasta oo aad dadaalkaaga ugu fiican sameysay, bisaddaadu had iyo jeer waxay la kulmi doontaa shilal yar. Intaas oo kaliya maahan, baalalka wasakhda ah ayaa ka mid ah xaqiiqooyinka nolosha ee ay leeyihiin milkiileyaasha bisaduhu inay la macaamilaan oo dhan, oo haddii dhammaantood aysan ku filnayn, timaha ka daata ayaa laga yaabaa in si muuqata loogu arko qorshooyinka midabka qaarkood.
Ka fikir waxyaalahan oo dhan markaad dooranayso midabka alaabta gurigaaga. Meelaha dhibcaha iyo dhogorta leh sidee caan ku noqon doonaan waxyaabaha aad fiirineyso? Iibsashada kuraasta qaabaysan iyo fadhiga inta badan waa hab wanaagsan oo lagu daboolo dhibaatooyinkaas.
Ma laha geeso fiiqan
Bisaduhu waxay jecel yihiin inay ciyaaraan oo ay sahamiyaan oo mararka qaarkood way yara xumaan karaan. Taas macnaheedu waxa weeye in alaabta guriga ku jirta ay khatar noqon karaan haddii aadan si caqli ah u dooran. Raadi waxyaabaha leh geesaha wareegsan ama suufka leh iyo geesaha. Dabcan, waxaa jiri doona waqtiyo yar oo ka mid ah alaabta guriga ay soo bandhigto khatar. Hubso inaad u dhigto waxyaabahaan qaab yareynaya fursadaha shilalka xun.
Waxba lugaha alwaax ma leh
Bisaduhu waa xayawaan dabiici ah. In badan oo dareen ah oo ka caawiya inay ku noolaadaan duurka ayaa ku jira bisadaha maanta ee guryaha. Mid ka mid ah dareenkaas ayaa ah in la caddeeyo cidiyahaaga. Bisaduhu waxay jecel yihiin inay ku qodo ciddiyaha yar yar kuraasta alwaaxda iyo lugaha miiska. Tani waxay u sameeyaan inay ka dhigaan kuwo fiiqan, laakiin sidoo kale si looga dhigo kuwo nadiif ah oo aan infakshan lahayn.
Haddii bisaddaadu aysan ku laheyn boosto xoqan oo gaar ah guriga, alaabtaadu ma noqon doonto baddal soo jiidasho leh. Bisaddaadu waxay u arki kartaa alaabta gurigaaga inay yihiin qalab soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh haddii aanu guriga lahayn xoqitaan. Mid soo iibso oo dhig sariirta bisada agteeda.
Si kastaba ha noqotee, lugaha oo kaliya maaha kuwa halista ku jira. Nooc kastoo alwaax ah oo ka samaysan alwaax waa aalad suurtagal ah oo lagu xoqin karo cidiyaha bisadaha. Ka fikir meesha aad dhigayso alaabtaan markay gurigaaga joogaan. Qari walxaha alwaaxda ah markay suurtagal tahay oo weydii naftaada: Ma jirtaa hab lagu xaddido gelitaanka alaabta alwaax?
Xoog leh oo la awoodi karo
Bisaduhu waxay noqon karaan kuwo xiise leh oo precocious, gaar ahaan markay yaryar yihiin. Waxay ku ciyaari doonaan alaabta gurigaaga waxayna waxyeello u geysan doonaan. Waxaad u baahan doontaa inaad si fudud uga gudubto. Ha iibsan alaab jilicsan ama jilicsan, hana ku qarashgareyn hantiHaddii kale, waxaad had iyo jeer ka walwalaysaa waxyeelada iyo burburka.
Bisaduhu way ku adkaan karaan qalabka guryaha. U fududee noloshaada adoo dooranaya waxyaabaha saxda ah ee lagu sameeyay agabka ugu habboon. Waqti sii aad ku xulato kuraasta, kuraasta fadhiga iyo alaab guriyeedka maalinlaha ah ee ku habboon nolosha bisadaha, waxaadna badbaadin doontaa culeys iyo walwal badan.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkani ay adiga waxtar kuu leeyihiin ? .
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sida loo doorto loona ilaaliyo fadhiga haddii aad leedahay bisad
Bisadaydu wax badan ma xoqdo laakiin wey fuulaysaa iyadoo ciddiyaha cidiyaha ka leh. Hadda oo aad leedahay ciddiyo markasta waad soo bixisaa, ma inaad gooysaa?
Ku jawaab Mariela
Haa, waad jari kartaa, laakiin waxaan aad ugula talinayaa inaad "bartaan" meesha uu wax ka xoqin karo iyo halka uusan ka awoodin, maadaama ay bisaduhu u baahan yihiin ciddiyihiisa si ay u fuulaan, wax u soo qaadaan, iwm. Halkan waxaan sharaxeynaa sida loo baro sida loo isticmaalo xoqida, iyo Halkan inaan la xoqin.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, weydii 🙂.
Goorma ayey nuujintu wax cuni karaan?
Maxay bisaduhu u cunaan bisadaha ay dhashaan?